အောကျတိုဘာ 7, 2018 – Healthy Life Journal
လည်ချောင်းကင်ဆာအဆင့် (၄)ကုသအောင်မြင်ခဲ့တာ ၇ နှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့ဆရာတော် ဦးဝေပုလ္လ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၀၉ ခုနစ်အစတွင် မြိတ်မြို့၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် တပ်ကြပ်ကြီး သူနာပြုလှမိုးသည် ချောင်းဆိုးသည့် ဝေဒနာရက်ရှည်လာပြီး အစားအသောက်ပင် မျိုချ၍မရအောင် နာကျင်သည့် ဝေဒနာ ခံစားခဲ့ရသည်။ “ စစချင်း သတိမထားမိဘူး၊ ချောင်းတွေ...
ရေကျောက်ပေါက်တဲ့အခါ . . .
မေး. ရေကျောက်ပေါက်နေသူတွေအနေနဲ့ ဘာတွေသတိထားသင့်ပါသလဲရှင့်။ ဒေါ်လေးခင်၊ တွံတေး။ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ရေကျောက်ပေါက်နေရင် အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ သူ့ဘာသာအနာကျက်ပြီး ပျောက်တဲ့အထိ စောင့်ရပါမယ်။ ကုတ်ခြစ်တာ၊ ထိခိုက်မိတာ၊ ဒဏ်ရာရတာ၊ ဆေးအပူတွေနဲ့ အရေပြားကိုစားစေမယ့် ဆေးတွေလိမ်းတာကို လုံးဝရှောင်ရပါမယ်။...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ယောဂကျင့်ရင် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရရှိနိုင်သလဲ . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ – သက်လုံကောင်းပြီး သန်စွမ်းစေပါတယ်။ – ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်ညီမျှစေပြီး သန္ဓေသားရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။ – ခါးအောက်ပိုင်း၊ တင်ပါး၊ ရင်ဘတ်၊ ကျောပြင်၊ လည်ပင်းနဲ့ပခုံးတွေ တောင့်တင်းနာကျင်မှုကို ပြေလျော့သက်သာစေပါတယ်။ – အာရုံကြောစနစ်ကို ငြိမ်းအေးစေပါတယ်။...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခံတွင်းအနံ့ဆိုးထွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း မျိုးစုံရှိတဲ့အနက် အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းက ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းတာနဲ့ ခံတွင်းခြောက်တာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝဆေး (၁) စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်း တချို့လူတွေမှာ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလည်း ကောင်းပါရဲ့၊ အထွေထွေကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းနေပါရဲ့နဲ့ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးထွက်နေတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရတာက...